Barcelona oo go’aamisay mustaqbalka xiddigeeda reer Brazil ee Philippe Coutinho – Gool FM
Barcelona oo go’aamisay mustaqbalka xiddigeeda reer Brazil ee Philippe Coutinho
Dajiye August 11, 2019
(Spain) 11 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa go’aamisay mustaqbalka kubad sameeyaheeda reer Brazil ee Philippe Coutinho, kaddib markii si weyn lala xiriiriyay inuu ka tagayo Camp Nou suuqan xagaaga.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ay go’aansatay inaysan iibin Philippe Coutinho, kaddib markii ay ku adkaatay inay ku iibiso qiimaha ay ku dooneyso.
Coutinho ayaa ku soo dhibtooday xili ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda Barcelona, kaddib markii uu ku fashilmay inuu soo bandhigo awoodii ciyaareed ee looga fadhiyay, taasoo hoos u dhigtay fursadii uu ka heli lahaa tababare Ernesto Valverde.
Inkastoo Barça ay ku qanacsan tahay in Philippe Coutinho uu sii joogo kooxda xilli kale, hadana waxaa wali u faran suurtogalnimada uu ugu biiri karo Paris Saint-Germain ama Bayern Munich dhamaadka suuqa, haddii ay ka soo gudbiyaan dalab macquul ah ee lagu fasaxi karo.
Tottenham oo si aad ah ugu dhawaatay inay la wareegto Coutinho, ayaa isaga hartay raacdadii ay ugu jirtay saacadihii ugu dambeeyay ee suuqa, sababa la xiriira in Barca ay codsatay 40 milyan oo ginni si ay amaah ugu siiso xiddigan mudo hal xilli ciyaareed oo keliya.
Spurs-ka ayaa arrintan u aragtay mid xad ka bax ah, gaar ahaan maadaama uu mushaarka xiddiga ku dhowyahay hal milyan ginni bishii.
Man United oo guul raaxo leh kaga daah furatay Premier League-ga, kaddib markii ay xasuuqday kooxda Chelsea … +SAWIRRO
Harry Maguire oo hal arrin ka codsaday saaxiibadiis cusub ee Man United, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Chelsea